Home Uncategorized စစ်မှန်တည်မြဲတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ အဆင့် ၆ ဆင့်ရှိတယ်(6 Step Of Love)
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ အသက်၂၀ ၃၀ ၄၀ ၅၀ အဘိုးကြီး အဘွားကြီးတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ထိ စစ်မှန်တဲ့ တည်မြဲတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလိုချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် များစွာသောချစ်သူစုံတွဲတွေ အိမ်ထောင်သည်တွေဟာ ပြတ်စဲပြိုကွဲသွားတတ် ဘာကြောင့်လဲမသိကြပါဘူး။ အများစုက အချစ်ရဲ့ Level 3လောက်ရောက်ရင် ပြတ်စဲသွားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ထာ ဝရတည်မြဲတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှိတဲ့ Level 5အထိရောက်အောင်သွားနိုင်မှသာ ပြိုကွဲခြင်းတွေကိုမခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ..ဘယ်လိုအဆင့်တွေလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်.
ဧဝကို အာဒံရဲ့နံရိုးနဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ချစ်ခြင်းအစ အာဒံနဲ့ဧဝလို့လည်းဆိုကြပြန်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အချစ်ရှိခဲ့လို့သာ လူ့လောကကြီးတွေက မျိုးစိတ်တွေ ဆက်လက်ရှင်သန်လည်ပတ်နေနိုင်တာပဲမလား? တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကျွ န်တော်တို့ အချိန်မရွေးချစ်မိသွားနိုင်ပါတယ်။
သဘာဝတရားရဲ့ လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုပေါက်ဖွားမလဲဆိုတာ ကြိုတင်မပြောနိုင်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ကိုချစ်မိသွားတာနဲ့ သူ့အတွက် အရာအားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ပေးဆပ်ဖို့ အနစ်နာခံဖို့ ကမ္ဘာကြီးကိုထမ်းပိုးဖို့ အင်အားတွေရှိလာတာပါ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ ပထမအဆင့်အနေနဲ့တော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုချစ်မိသွားခြင်းနဲ့ သူ့အချစ်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့ ပေးဆပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက်တွေ အိမ်မက်တွေကို အတူအကောင်အထည်ဖော်ကြဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားပြင်းထန်နေတဲ့အဆင့်ပေါ့။ ကဲ ပထမအဆင့်တော့ရောက်ဖူးကြတယ်မလား?
ဒီအဆင့်မှာ အချစ်ဟာပိုနက်ရှိုင်းလာပြီး ချစ်သူစုံတွဲတွေအဖြစ် ပေါင်းစည်းလိုက်ကြပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာ အချစ်နဲ့အတူ နားလည်မှုတွေ ပေးဆပ်မှုတွေ ဂရုစိုက်မှုတွေ အနစ်နာခံမှုတွေကို နှစ်ဦးသဘောတူ တည်ဆောက်နေကြပါပြီ? ချစ်သူတွေစဖြစ်ပြီး ၆လလောက်အကြာမှာ နားလည်မှုတည်ဆောက်တဲ့အဆင့်ကို ကျော်လွန်လာပြီး အချစ်ဟာ ပိုမို Heatတက်လာပါပြီ။
ချိုမြိန်တဲ့အချစ်ကို အတူစားသုံးနေကြပါပြီ။ ဒီအဆင့်ဟာ နှစ်ယောက်တစ်ဘဝကို ထူထောင်ဖို့ လေ့လာနေတဲ့အဆင့်ဖြစ်လာပါပြီ။ ချစ်သူဖြစ်ပြီးလို့၂နှစ်လောက်ဆိုရင် ချစ်သူစုံတွဲတွေဟာ အချစ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေလျော့နည်းလာကြပါပြီ။ ဆိုလိုတာက ဟိုကိစ္စ ဒီကိစ္စ တွေထက် ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့လူချင်းစိတ်ချင်းပိုရင်းနှီးလာတယ်။
နစ်ဦးသားပိုပြီး အေးဆေးတည်ငြိမ်လာတယ် လုံခြုံနွေးထွေးမှုကို ခံစားလာရတယ် နှစ်ယောက်တစ်ဘဝထူထောင်ဖို့ စုဆောင်းလာကြတယ် ပိုပြီးတန်ဖိုးထားတတ်လာကြပါတယ်။ တချို့ချစ်သူ စုံတွဲတွေကတော့ နားလည်မှုတည်ဆောက်တဲ့အဆင့်မှာတင် ပြတ်တောက်သွားတတ်ကြပြီးတော့ ဒီအဆင့်ထိမရောက်လာတော့ပါဘူး။
ဒီအဆင့်ဟာ အချစ်ရဲ့ အရှိန်လျော့ကျသွားတဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့စုံတွဲတွေကတော့ အဆင့်၂မှာတင် ပြတ်တောက်သွားပါပြီ။ အခုရောက်လာမယ့်အဆင့် ၃ဆိုတာကတော့ အချစ်နဲ့အတူပေါက်ဖွားလာတဲ့ စိတ်ပျက်ခြင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ခဲ့ကြတဲ့နှစ်တွေ အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့ အမျှ အချစ်တွေတိုးတိုးလာဖို့ဆိုတာ တော်တော်တော့ခက်ခဲပါတယ်။ လူတွေဟာ အသစ်အဆန်းကြိုက်ကြပါတယ်။ ရိုးအီငြီးငွေ့လွယ်တဲ့ လူစားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်သားချည်းပဲနေ့တိုင်းဘယ်စားချင်ပါ့မလဲ? ဒီလိုအချိန်တွေမှာ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် အူမချေးခါးအထိ သိကြပီဖြစ်သလို အရင်တုန်းကလို ဂရုစိုက်မှု နွေးထွေးမှုတွေသိပ်မရှိကြတော့ပါဘူး။ အချစ်တွေလျော့လျော့တော့ အပြစ်တွေတိုးတိုးလာပါတော့တယ်။ ရန်တွေဖြစ်မယ် ပြဿနာတွေတက်မယ်။ နောက်ဆုံးလမ်းခွဲပြတ်စဲမှုတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ဒီအဆင့်ကို ကျော်လာတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေကတော့ ၂ယောက်တစ်ဘဝကိုထူထောင်လိုက်ကြပါပြီ။ တချို့ အတွဲတွဲကတော့ ဒီအဆင့်မှာလည်း အချစ်တွေမပြယ်ပဲ ချစ်မြဲချစ်ဆဲပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တချို့အတွဲတွေကျတော့ ဒီအဆင့်မှာပြတ်တောက်ကြတာပါ။
ဘာလို့ပြတ်တောက်ကြလဲဆိုတော့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ လွမ်းရဆွေးရတာတွေမရှိတော့ပါဘူး။ ဘဝအတွက်ရုန်းကန်နေရပါပြီ။ အချစ်တွေလည်း ရိုးအီနေပါပြီ။ ဒီတော့ အမျိုးမျိုးသော အဆင်မပြေမှုတွေအတွက် စိတ်တိုလွယ် ဒေါသထွက်လွယ်တာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ရန်တွေဖြစ် ပြဿနာတွေတက်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ လမ်းခွဲပြတ်စဲလိုက်ကြတော့တာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ အရင်တုန်းက အချစ်တွေပြန်ရဖို့ အချစ်ကိုရှင်သန်အောင်မွေးမြူနည်းတွေလိုအပ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဆင့်၄မှာ မပြတ်တောက်ပဲ ခိုင်မာတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အချစ်တွေကို ပြန်ပြန်နွှေးပါ။ နွေးထွေးပေးပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအသစ်တွေကို ဟိုးချစ်သူတွေဘဝတုန်းကလို ဖန်တီးပေးပါ။ တန်ဖိုးထားပေးပါ။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပါ။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လေးလေးစားစားဆက်ဆံပြီး “စံပြအိမ်ထောင်ရေး”တစ်ခုကို ကြိုးစားတည်ဆောက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့သင်တို့ရ့အချစ်တွေဟာ ပြန်လည်ခိုင်မာလာမှာဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်
အဆင့်၃နဲ့၄ကို ကျော်လွန်လာခဲ့ပြီ။ အဲ့ဒီအဆင့်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဆုလက်ဆောင်အနေနဲ့ ပဋိပက္ခတွေ အထင်လွှဲမှုတွေ သံသယတွေဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကို သင်တို့ရရှိခဲ့ပြီ။ ခက်ခဲမှုတွေကို ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ရမလဲဆိုတာကို ကောင်းမွန်စွာ သင်ကြားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအဆင့်မှာ သင်တို့ဟာ အချစ်ဆိုတာထက် စစ်မှန်တည်မြဲတဲ့မေတ္တာကိုဖန်တီးနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုပဲ သံယောဇဉ်တွေတိုးပြီးရစ်နှောင်ချည်ဖွဲ့ခဲ့ပြီဖြစ်လို့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားအကြောင်းကို ကောင်းစွာသင်ကြားတတ် မြေ ာက်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူဘာကြီးဖြစ်နေလို့ချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲ သူဖြစ်နေလို့ချစ်တာဆိုတဲ့အချစ်မျိုးနဲ့ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတန်ဖိုးထားပြီး ဘဝကိုဖြတ်သန်းကြပါပြီ။
လူတော်တော်များများကတော့ ကမ္ဘာကြီးကို ပစ်ထားလိုက်ကြပါတယ်။ အဆက်မပြတ်စစ်ပွဲတွေ လူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေ နဲ့ပြည့်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ပိုပြီး ဘယ်လိုကောင်းမွန်အောင် သူတို့ ၂ဦး အတူလုပ်ဆောင်နိုင်ကြမလဲဆိုတာ ဒီအဆင့်မှာ စဉ်းစားလာကြပါပြီ။
သူတို့တွေဟာ စစ်မှန်တဲ့ ထာဝရတည်မြဲတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ရှိတဲ့လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေထိ ဖြန့်ကျက်ဖို့ စဉ်းစားလာတာမျိုးပါ။ ဒီတော့ သူတို့ဟာ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြဿနာတွေ ပဋိပက္ခတွေကို အတူဝိုင်းပြီးဖြေရှင်းပေးကြတ ယ်။ ပရဟိတတွေ များများလုပ်ကြတယ်။ သတ္တဝါလေးတွေကို ကြင်နာသနားကြတယ်။ သူတို့ပြောင်းလဲနိုင်သလောက် စိတ်တူကိုယ်တူ အတူလိုက်ပြောင်းလဲကြတယ်။
ဒီလို တူနှစ်ကိုယ် လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ စစ်မှန်တည်မြဲတဲ့ မေတ္တာတရားနဲ့မှ ရတာမျိုးပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ပါရမီဖြည့်ဖက်ဆိုတာလိုမျိုးအဆင့်ထိဖြစ်သွားတာပါ။ ဒီအဆင့်၆ဟာချစ်သူတွေအတွက် နောက်ဆုံးLevelပါပဲ။
သူတို့ဆံပင်တွေဖြူဆွေးလာတဲ့အထိ သူတို့နားတွေကောင်းကောင်းမကြားရတော့တဲ့အထိ ထာဝရထက်ပိုတဲ့အချစ်တွေနဲ့ ညဘက်တွေမှာလည်း ကြယ်တွေကို သူတို့ အတူငေးချင်ငေးနေပါလိမ့်မယ်။ကဲ..ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားနဲ့ပက်သက်လို့ သင်ရောဘယ်အဆင့်ထိ ရောက်ခဲ့ဖူးလဲ?
Previous articleကလေးငယ်စဥ်ကတည်းက သင်ကြားပေးထားသင့်တဲ့ ဘဝတွက်တာအရည်အချင်းများ
Next articleမိဘတွေ အိုမင်းလာချိန်မှာ ကျွန်မတို့ဆီကနေ မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာ (၅)ခု
Nandar Lwin - September 17, 2020 0